Sina 8.0W / mk fitarihana hafanana ambony MCPCB ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy fanilo elektrika | Kangna
8.0W / mk fitarihana hafanana ambony MCPCB ho an'ny fanilo elektrika
Karazana metaly: Base aluminium
Isan'ny sosona: 1
Surface: HASL maimaim-poana
Ny hatevin'ny takelaka: 1.5mm
Ny hatevin'ny varahina: 35um
Fitondra-tena maharitra: 8W / mk
Fanoherana maharitra: 0.015 ℃ / W
Fampidirana ny MCPCB
MCPCB no fanafohezana ny PCB core core, ao anatin'izany ny PCB miorina amin'ny aluminium, PCB miorina amin'ny varahina ary PCB mifototra amin'ny vy.
Ny tabilao miorina amin'ny aliminioma no karazana mahazatra indrindra. Ny akora fototra dia misy alimo aluminium, FR4 mahazatra ary varahina. Izy io dia manasongadina sosona mitafy hafanana izay manaparitaka ny hafanana amin'ny fomba mahomby indrindra ary misy singa mangatsiaka. Amin'izao fotoana izao, ny PCB miorina amin'ny alimina dia heverina ho vahaolana amin'ny hery lehibe. Ny tabilao miorina amin'ny aliminioma dia afaka manolo ny tabilao vita amin'ny keramika azo tsapain-tànana, ary ny aliminioma dia manome tanjaka sy faharetana amin'ny vokatra iray izay tsy zakan'ny vatan'ny seramika.
Ny varahina varahina dia iray amin'ireo substrata vy lafo vidy indrindra, ary ny fitarihana hafanana dia tsara kokoa imbetsaka noho ny an'ny substrata alimina sy ny vy. Izy io dia mety amin'ny fanaparitahana hafanana avo lenta avo indrindra, singa ao amin'ny faritra misy fiovana lehibe amin'ny hafanana avo sy ambany ary fitaovana fampitaovana mazava tsara.
Ny sosona fanamafisam-peo dia iray amin'ireo singa fototra amin'ny varahina vongan-tany, noho izany ny hatevin'ny varahina varahina dia 35 m-280 m ny ankamaroany, izay afaka mahatratra ny fahafaha-mitondra ankehitriny. Raha ampitahaina amin'ny substrate aluminium, ny substrate varahina dia mety hahatratra ny fiparitahan'ny hafanana tsara kokoa, mba hiantohana ny fiorenan'ny vokatra.
Firafitry ny PCB Aluminium
Layer Copper Circuit
Ny sosona varahina boribory dia novolavolaina sy voasokitra mba hamorona boribory vita pirinty, ny substrate aluminium dia afaka mitondra onja ambonimbony kokoa noho ilay FR-4 matevina mitovy sy ny sakan'ny soritra mitovy aminy.
Ny sosona insulate dia ny teknolojia fototra an'ny substrate aluminium, izay matetika mitana ny asan'ny insulate sy ny conduction heat. Ny sosona fisorohana substrate aluminium no sakana lehibe indrindra amin'ny firafitry ny angovo. Arakaraka ny maha-tsara kokoa ny fitarihana hafanan'ny sosona misisika no mahomby kokoa amin'ny fanaparitahana ny hafanana vokarin'ny fiasan'ny fitaovana sy ny fihenan'ny maripanan'ilay fitaovana,
Karazana vy inona no hofidintsika ho substrate vy mifono vy?
Tokony hodinihintsika ny coefficient fanitarana hafanana, ny fitondran-tena amin'ny hafanana, ny tanjaka, ny hamafiny, ny lanjany, ny toetr'andro amboniny ary ny vidin'ny substrate vy.
Raha ny mahazatra, ny aluminium dia somary mora vidy kokoa noho ny varahina. Ireo fitaovana vita amin'ny aliminioma dia 6061, 5052, 1060 sns. Raha misy fepetra takiana avo lenta amin'ny fitarihana hafanana, toetra mekanika, fananana elektrika ary toetra manokana hafa, takelaka varahina, takelaka vy tsy misy fangarony, takelaka vy ary takelaka vy silikika azo ampiasaina ihany koa.
Fampiharana ny MCPCB
1. Audio: fampidirana, fanamafisam-peo output, fanamafisam-peo mifandanja, fanamafisam-peo, fanamafisam-pahefana.
2. Famatsiana herinaratra: mpanera mifamadika, mpanova DC / AC, mpandrindra SW, sns.
3. Fiara mandeha: regulator électronique, ignition, contrôleur power supply, sns.
4. Solosaina: tabilao CPU, kapila kapila, fitaovana fampitaovana herinaratra sns.
5. Modules Power: Inverter, relay amin'ny fanjakana matanjaka, tetezana mpanitsy.
6. Jiro sy jiro: jiro mitsitsy angovo, karazana jiro LED mitsitsy angovo isan-karazany, jiro ivelany, jiro sehatra, jiro loharano
8W / mK PCB mifototra amin'ny alàlan'ny hafanana avo
Hatevina amin'ny takelaka: 1.5mm
Hatevin'ny varahina: 35um
Fitondrana hafanana: 8W / Mk
Fanoherana mafana: 0,015 ℃ / W
Karazana metaly: Aluminium base
Isan'ny sosona: 2
Karazan-dingana: Taratasy varahina fisarahana Thermoelectric
Fitondrana hafanana: 398W / Mk
Hevitra famolavolana: Torolàlana metaly mahitsy, faritry ny fifandraisana amin'ny bara varahina dia lehibe ary kely ny tariby.
Previous: 1.6mm haingana prototype fenitra FR4 PCB
Manaraka: FPC mora azo aidina Polyimide azo fehezina miaraka amin'ny FR4 manamafy